Inhlangano ikhulekele umphakathi | News24
Inhlangano ikhulekele umphakathi
Isithombe: nosipho mkhizeUsihlalo wenhlangano uMnuz A.S Mbanjwa nomsunguli wenhlangano uMfu Ntshangase.
INHLANGANO engenzi nzuzo eyaziwa ngokuthi yi-Enhlanhleni Isibani Sezwe ibe nomcimbi womkhuleko ohlanganise izinhlanagano ezehlukene nomphakathi.
Okhulumela le nhlangano uMfu Ntshangase uthe inhloso yalo mcimbi ukukhulekela konke okubi okwenzeka emhakathini.
Uthe: “Kulo mcimbi sikhulekele inhlupheko esibhekene nayo njenga malungu omphakathi, sakhulekela isifo sesandulela ngculazi, izidakakamizwa ezingekho emthethweni ikakhulukazi iwunga esidle lubi emphakathini, ukuhlukunyezwa kwabesifazane, ukudlwengulwa kwezingane nabesifazane emphakathini kunzima-ke manje ngoba akusadlwengulwa abesimame kuphela kodwa sekuvamile nokudlwengulwa kabafana endaweni.
Kubhlungu kakhulu ukuzwa ukuthi ingane idlwenuglwe ngesikhathi ithunywe esitolo, uzwe kuthiwa ibizwe umakhelwane othi ufuna ukuyithuma kanti ufuna ukufeza izinjongo zakhe ezimbi. Sisanda kuzwa ukuthi kutholakale isidumbu sentombazane khona la endaweni.”
Lo mcimbi ubuthanyelwe amaphoyisa, abahlengikazi, inhlangano engenzi nzuzo iSt Clements Home Based Care, inhlangano yabadala iMuthande Society for the Aged nabefundisi bamabandla ahlukene.
“Iningi la labantwana baphila nesifo sesandulela ngculazi ngakho-ke ama volontiya ale nhlahlano ayazifundisa izingane ngalesi sifo.
“Sinama volontiya afundisa ngalesi sifo nokuthi kungani kumele zidle imishwanguzo yama-ARV. “Abanye babo babengazi ukuthi banalesi sifo ngoba imindeni yabo yayesaba ukubatshela.
“Intsha eningi emphakathini ihlala nogogo nomkhulu bayo, futhi ivame ukusebenzisa izidakamizwa ezingekho emthethweni. Lentsha ivamise ukuntshontsha emakhaya ukuze yanelise izifiso zayo zokusebenzisa lezi zidakamizwa futhi abanye babo bagcine sebedlwengule izingane emphakathini.
“Konke lokhu inhlangano izama ngokusemandleni ukungenelela iphinde ilekelele labo abadinga usizo ezimweni ezifuze lezi,” kusho yena.
Uma uthanda ukwazi kabanzi ngale nhlangano noma uma uthanda ukuyixhasa shayela
uMfu Ntshangase enombolweni ethi:082 666 0876.